Gaalkayco: Nabaddoon Xuseen C Dude oo la aasay iyo dilkiisa oo aan cidna loo qaban. – Radio Daljir
Gaalkayco: Nabaddoon Xuseen C Dude oo la aasay iyo dilkiisa oo aan cidna loo qaban.
Gaalkacyo, Mar 21 – Allaha u naxariistee waxaa maanta (Isniin) magaalada gaalkacyo lagu aasay Nabadoon Xuseen Cali Dude oo xalay salaadda cishe ka dib burcad hubaysani ay ku dileen meel aan ka fogayn masaajidka Ramadaan ee magaalada Gaalkacyo.
Marxuumka ayaa la sheegay in ay rasaas ku fureen laba nin oo hubaysan kadib markuu ka soo baxay salaadda Cishaha Masaajidka Ramadaan xilli uu gurigiisa ku sii jeeday.
Aaska Marxuum Xuseen Cali Dude ayaa Waxaa ka qaybgalay masuuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda Puntland, Xubno ka socday maamulka gobalka iyo kan degmada, saraakiisha ciidamada iyo Xubno farabadan oo ka socday waxgaradka iyo qayabaha bulshada ee Degmadan Gaalkacyo.
Marxuum Xuseen Cali Dude wuxuu ku dhashay Degmada Galaaddi wuxuuna ka tagay laba xaas iyo Caruurtood oo ku kala sugan dalka iyo dibadiisa.
Nabadoon Xuseen Cali Dude wuxuu waxbarashadiisii Dugsiyada H/dhexe ku soo dhamaystay gobalka Mudug sida uu xaqiijiyay Yusuf C/raxmaan Dulcad oo ka mid ahaa saaxiibada ay aadka isugu dhawaayeen marxuumkan wuxuuna mudo farabadan ka shaqaynayay arrinta nabadoon nimada wuxuuna si gaar ah uga mid ahaa ganacsatada Gaalkacyo.
Inkastoo ay wali socadaan hawlgalada la xiriira baaritaanka dadkii falkan ka dambeeyay ayaan haddana caddayn waxa uu nabadoonku sababsaday mana jirto jiho sheegatay mas’uuliyadda dilkaas. Ciidamada ammaanka ayaa inta la ogyahay wax la tuhunsan yahay u qaban dilka marxuum dude.
Dilka nabaddoonkani wuxuu imaanayaa xilli magaaladan Gaalkacyo dhawaan laga fuliyay howl-gallo ammaan oo ay dawladdu sheegtay in ay ku qabqabatay dad badan oo lagu tuhunsan yahay in ay ka dambeeyeen dilalkii laga fulin jiray magaalada Gaalkacyo dhowrkii sano ee la soo dhaafay, kuwaas oo dhammaantood lagu ugaarsado nin-doorka iyo wax ku oolka bulshada. Xeer ilaaliyaha guud ee dawlada Puntland Maxamuud Xasan Aw-Cismaan ayaa Sabtidii dorraad ahayd ka badbaaday isku day dil kadib qarax lala beegtay gaarigiisa mar uu marayey agagaarka warshadii hore ee Galeyda ee xaafada Garsoor ee magaalada Galkacyo.